RPR Induction Pipeline Kupfeka Kubvisa Kunyorera
musha / induction kubvisa kubvisa / RPR Induction Pipeline Kupfekedza Kubvisa Kunyorera
Category: induction kubvisa kubvisa Tags: tenga induction inobvisa hita, kuburitsa kupfeka kubviswa, induction pombi yekupfeka kubviswa, kubvisira kubvambura, induction inobvisa hita, induction kubvisa kubvisa, induction kubvisa kubvisa system, inducton pendi kubviswa, RPR, Kubvisa RPR, kubvisa kubvisa
RPR Induction Pipeline Kupfekedza Kubvisa-Induction Rust Paint Kubvisa Kubvisa
Sei kuburitsa kupfeka kubviswa | Induction Kubvisa Kunoshanda?
kubviswa kwekuvhara kubviswa | Induction kubvisa Inopisa yekudziya jenareta inotumira inochinjika yazvino kuburikidza neiyo induction coil, iyo inogadzira magetsi emagetsi munda. Iyi munda inokonzeresa mafashama anoshandurwa kuita kupisa mukubata nekuitisa zvinhu simbi. Iko kupisa kunoitwa pasi pekupfekedza, zvichikonzera kupfeka kuti ikurumidze kukurumidza. Iyi nzira inokodzera kurapa nzvimbo dzakatsetseka kana dzakakomberedzwa panzvimbo yebasa uye haidi chero kuvharirwa.
Iyo induction yekumira kubviswa | kubvambura kutema system kuchabvisa pendi, kumwe kupfeka, ngura inorema, bhakitiriya ngura nemafuta uye mafuta emagetsi maficha (ferromagnetic simbi) ichipwanya kubatana kwehukama pakati pezvinhu uye iyo substrate etch masara, induction kupisa inzvimbo uye inodzorwa izvo inoshandisa mashoma simba.
HLQ inorerutsa ako ekuputira ekubvisa zvido neimwezve yechimurenga tekinoroji: Induction Kubvisa! HLQ's induction stripping michina inobvisa yako yakapfekedza kupfeka kubva kune simbi zvivakwa pasina ruzha kana yechipiri marara - kusvika pasi chaipo pasimbi.
Kana iwe wakamboshuvira mashiripiti wand kugadzirisa ako ekushongedza ekubvisa musoro, HLQ ine chinotevera chakanakisa chinhu. HLQ nyanzvi inogona kusimudzira yedu yekumisikidza wand pamusoro penzvimbo yako yekumhara uye kubvisa-zvisungo zvimwe zvakaomesesa kubvisa kupfeka pamitengo inokwana kusvika kagumi nekukurumidza kupfuura kukwikwidza matekinoroji senge sandblasting. Haisi mashiripiti, asi yedu induction yekubvisa tekinoroji iseki yechipiri ! Kana nyanzvi dzeHLQ dzichifambisa musoro wedu wekupinza pamusoro pesimbi, inogadzira kupisa kwakaringana (kazhinji 10 kusvika mazana mana emadhigirii) kuti ikurumidze kusunungura machira mazhinji kubva kumatangi, matangi, mapaipi, ngarava uye mapuratifomu ekumahombekombe, zvichibvumira kupfeka (kusvika pa300-inch gobvu) kubviswa mumachira.
RPR Kupisa Induction Kupfekedza Kubvisa
RPR Kuchenesa Kuchenesa kupfeka kubviswa inoshanda nemusimboti weiyo induction. Kupisa kunogadzirwa mune yesimbi substrate uye chisungo pasimbi uye yekumonera interface yaputswa. Iko kupfeka kunobva kwabviswa zvachose pasina kuparara uye kusununguka zvachose kubva kune zvinosvibisa vamiririri, kureva. blast media. Izvi zvinoita kuti kurasa marara nekushandisa patsva kuve nyore uye kudhure zvakanyanya.
Nesimba rekushandisa simba kunyangwe iwo makobvu akakora uye akaomesesa anogona kubviswa zvachose. RPR Kupisa Induction inokurumidza kupfuura nzira dzakajairika. Maitiro akanyarara ekupfekedzwa kwekubvisa zvinoreva kuti mainjiniya edu anogona kushanda masikati kana husiku pasina kusvibiswa kweruzha.
Nekuda kweakawanda mabhenefiti eedu induction kupisa maitiro, isu takakwanisa kupa akasiyana huwandu hweAlliance vatengi nebasa ravanoda. Takashanda nevatengi mumaindasitiri akadai se:
Kudya & kunwa kunwiwa
Zvitoro uye zvekudya
Mahotera & mutsa
Madziva ekutengesa uye emvura
HLQ's-kudonhedza induction dis-bonding maitiro inobvisa akawanda emhando yekumachisa, kusanganisira:
Marasha Tar Epoxy
Chartek yekudzivirira moto kana zvimwe zvipfeko zvekufungidzira
Inokurumidza, Yakadzikama, Yakachena, Yakachengeteka Kugadzirira Kwepamusoro
Vamwe vangati kubvisira kuburitsa ndiyo "inokurumidza uye yakasviba" nzira yekuita kuti basa riitwe, asi chokwadi rinokurumidza, uye harina kushata zvachose. Nekuti kubvisira induction kunogadzira hakuna tsvina yechipiri, kuchenesa kuri nyore. Kubata nemashizha kana mitsetse yekupfeka iri nyore kwazvo pane kubata neyekufema midhiya uye guruva.
Muzviitiko zvakawanda, midziyo inogona kurerutswa kana kubviswa zvachose. Fungidzira uchibvisa chinodhura scaffolding uye container chirongwa uye uchitsiva icho nekusimudza snorkel uye jira rekudonha!
Mimwe mishandirapamwe inogona kushanda padhuze neHLQ yekubvisa mabasa nekuti inzira yakanyarara isingazogadziri ruzha runokanganisa kugadzirwa kwevamwe makondirakiti aungave uchishanda pane yako projekiti.
Yedu induction yekutora michina haina zvinofamba zvikamu, zvichiita maitiro edu akachengeteka zvakanyanya kupfuura hydro-blasting kana sandblasting revashandi vako, vamwe makondirakiti, vatengi uye vanopfuura.
RPR induction inobvisa pendi, kupfeka, ngura gobvu, bhakitiriya ngura uye mafuta & girisi zvakasara kubva munzvimbo yemagetsi inoitisa (simbi, nezvimwewo) nekutyora kupindirana kwehukama pakati pezvinhu zvinobviswa uye substrate ichishandisa inodzorwa, yemuno induction kupisa ne mini - mum kushandisa simba.
Iyo RPR induction jenareta inotumira inochinjika zvazvino kuburikidza ne induction heat coil, iyo inogadzira electro-magnetic field. Iyi magnetic field inokwezva eddy mafungu mune inoitisa mitezo- simbi simbi. Nekuda kwekushomeka kwesimbi, aya mazaya anoshandurwa kuita kupisa = kupisa kupisa. Iko kupisa kunogadzirwa pazasi pekupfeka, zvichikonzera kukurumidza uye kwakachena kubvisa.
Iyo RPR system yakanakira kubvisa pendi, ngura, uye zvimwe zvipfeko (irubcanized rubber, moto unodzivirira, epoxies, nezvimwe zvine masimba ekudzora emabasa anotevera:
• Simba rekushandisa
• Kubvisa tembiricha renji
• Kupisa kwekupisa
• Kubvisa kumhanya
Iine pamusoro pekumisikidza mikana, RPR inounza isina kuenzana mashandiro uye ndiyo sisitimu yesarudzo yemutengo-unoshanda, wakachengeteka uye zvakatipoteredza zvine hunyanzvi hwekunze kwepasi kubviswa kubva kune simbi substrates.
RPR yakanaka kune: marine, matangi, ekumahombekombe uye epasi-based mapaipi
Induction Kupfeka Machine & Induction Paint Kubvisa Sisitimu & RPR Induction Sisitimu